Ben Rafoth Gụsịrị Akwụkwọ na Grant Grant - International Writing Centers Association
Jenụwarị 15 na July 15 kwa afọ.
Associationlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ide Ọgụgụ Mba na-eje ozi iji wusie obodo etiti ide ihe ike site na ọrụ ya niile. Nzukọ ahụ na-enye Onyinye Nchọta Gụsịrị Akwụkwọ na IWCA Ben Rafoth iji gbaa mmepe nke ihe ọmụma ọhụrụ na ngwa ọhụụ nke echiche na usoro ndị dị ugbu a. Onyinye a, nke onye ọka mmụta na-ede akwụkwọ na onye otu IWCA bụ Ben Rafoth guzobere, na-akwado ọrụ nyocha metụtara ihe ọmụmụ nna ukwu ma ọ bụ akwụkwọ nyocha doctoral. Ọ bụ ezie na ego ejegharị ejegharị abụghị nke ebumnuche onyinye a, anyị kwadoro njem dị ka akụkụ nke ọrụ nyocha a kapịrị ọnụ (dịka ịgagharị na saịtị ụfọdụ, ọba akwụkwọ ma ọ bụ ebe ndebe akwụkwọ iji mee nyocha). Ego a abụghị iji kwado naanị njem ọgbakọ; kama njem ahụ ga-abụ akụkụ nke usoro nyocha ka ukwuu nke edepụtara na arịrịọ enyemaka ahụ.
Ndị anamachọ ihe nwere ike itinye akwụkwọ ruru ihe ruru $ 1000. (MARA: IWCA nwere ikikere iji gbanwee ego onyinye.)
Ngwa ga-edozi site na IWCA Otu ụzọ site na ụbọchị iche iche. Ndị anamachọ ihe gha aghaghi IWCA. Ngwa ngwa ahụ nwere ihe ndị a:
Akwụkwọ ozi mkpuchi nyere onye isi oche nke Kọmitii Enyemaka Nyocha ugbu a na-ere kọmitii ahụ na uru ọ ga-erite na nkwado ego. Karịsịa, ọ kwesịrị:
Rịọ maka ịtụle IWCA maka ngwa ahụ.
Gwa onye choro ya na oru ya.
Gụnye ihe akaebe nke Researchlọ Ọrụ Nyocha Institutional (IRB) ma ọ bụ nnabata ndị ọzọ ụkpụrụ omume. Ọ bụrụ n’ịjikọtaghị ụlọ ọrụ yana usoro dịka, biko gaa na Enyemaka na Onyinye Enyemaka maka nduzi.
Kọwaa otú a ga-esi jiri ego ego mee ihe (ihe, njem nyocha, usoro nyocha, akwụkwọ ozi, wdg).
Nchịkọta Ọrụ: Nchịkọta peeji nke 1-3 nke ọrụ a chọrọ, ajụjụ nyocha ya na ebumnuche ya, ụzọ, usoro iheomume, ọnọdụ ugbu a, wdg. Chọpụta ọrụ a n'ime akwụkwọ ndị dị mkpa.
Ihe ndi mmadu na-atu anya
Nabata nkwado IWCA na ngosi ọ bụla ma ọ bụ mbipụta nke nchọpụta nchọpụta ọ rụpụtara
Gaanụ na IWCA, na-elekọta oche nke Kọmitii Enyemaka Research, mbipụta nke akwụkwọ ma ọ bụ ihe ngosi
Debanye akụkọ banyere ọganihu na IWCA, na-elekọta oche nke Kọmitii Enyemaka Research, na-akwụ n'ime ọnwa iri na abụọ nke nnata nke ego ego. Mgbe ị rụchara ọrụ ahụ, nyefee akụkọ IWCA nke ikpeazụ, na-elekọta oche nke Kọmitii Enyemaka Research
Jiri nlezianya tụlee ịnyefe ihe odide na-adabere na nyocha a na-akwado ya na otu n'ime akwụkwọ ndị mmekọ IWCA, WLN: A Journal of Writing Center Scholarship, Akwụkwọ Ederede Center, The Peer Review, ma ọ bụ International Writing Centers Association Press. Dịrị njikere iso ndị nchịkọta akụkọ na ndị nyocha na-arụ ọrụ iji degharịa ihe odide ahụ maka mbipụta enwere ike.
Kọmitii Grant usoro
Oge ikpebi ikpe bụ Jenụwarị 15 na July 15. Mgbe oge ọ bụla gasịrị, oche nke Kọmitii Na-enye Enyemaka Nyocha ga-ezigara ndị otu kọmitii nke ngwugwu zuru ezu maka ịtụle, mkparịta ụka, na votu. Ndị anamachọ ihe nwere ike ịtụ anya izu izu 4-6 site na nnata nke ngwa.
Maka ama ọzọ ma ọ bụ ajụjụ, kpọtụrụ onye isi oche nke Kọmitii Enyemaka Research ugbu a, Katrina Bell, kbell@coloradocollege.edu.
2021: Marina Ellis, “Echiche Ndị Nkuzi na Ndị Mmụta Na-asụ Spanish n’Ebe Ọmụma Ọgụgụ na Mmetụta Mmetụta Ha Na-enwe na Oge Nkuzi”
2020: Dan Zhang, “Expmụbawanye Okwu Ahụ: Nkwupụta Dọrọ na nkuzi nkuzi” na Cristina Savarese, “Ederede Center Jiri n'etiti Community College Mmụta”
2019: Ana Cairney, Mahadum St John, "Agencylọ Ọrụ Na-ede Ihe Idekọ Ihe Ndekọ: Akwụkwọ edemede na Nkwado nke Ndị Ọdee Akwụkwọ"; Jnke Franklin, "Transnational Writing Studies: Instghọta Oru na Institutional Work Site Narratives nke Navigation"; na Yvonne Lee, “Ide Ihe Gakwuru Ọkachamara: Thelọ Ọrụ Na-ede Ihe n’ Writlọ Ọrụ na Mmepe nke Ndị Gụsịrị Akwụkwọ”
2018: Mike Hen, Mahadum Wisconsin-Madison, “Omume ndị nkuzi, ebumnobi ya, na njirimara dị iche iche na omume: ịzaghachi ahụmịhe na-adịghị mma nke ndị edemede, mmetụta uche, na omume na nkuzi nkuzi”; Talisha Haltiwanger Morrison, Mahadum Purdue, "Ndụ ojii, Ọnọdụ White: N'ịghọta Ahụmahụ nke Ndị Nduzi Black na Predominantly White Institutions"; Bruce Kovanen, “Mmekọrịta Nzukọ nke Embodied Action na Writing Center Tutorials”; na Bet Towle, Purdue University, "Critiquing Collaboration: Instghọta Institutional Writing Omenala site na Empirical Study of Writing Center-Writing Mmemme Mmekọrịta na Small Liberal Arts kọleji."
2016: Nancy Alvarez kwuru, “Nkuzi oge Latina: Makingme oghere maka Nuestras Voces na Ebe Ederede”
2015: Rebecca Hallman kwuru n'ihi na ya nnyocha na ide center mmekọrịta na ọzụzụ n'ofe kampos.
2014: Aha ya bụ Matthew Moberly n'ihi na “nnukwu nyocha ọ mere banyere ndị isi ụlọ ọrụ ide ihe [nke ga-eme] ka ọrụ ubi nwee mmetụta nke etu ndị isi nchịkwa n’obodo ahụ si aza oku a na-atụle.”
2008 *: Bet Godbee, "Ndị nduzi dị ka ndị na-eme nchọpụta, Nnyocha dị ka Omume" (nke dị na IWCA / NCPTW na Las Vegas, w / Christine Cozzens, Tanya Cochran, na Lessa Spitzer)
* E gosipụtara Ben Rafoth Graduate Research Grant na 2008 dị ka onyinye njem. Enweghi onyinye ozo rue 2014, mgbe IWCA jiri ochichi dochie "Grant Graduate Research Grant" na "Ben Rafoth Graduate Research Grant. N'oge ahụ, ego onyinye ahụ ruru $ 750 ma gbasaa onyinye ahụ iji kpuchie mmefu gafere njem.